Ndị nkuzi na-enye ndị na-agagharị agagharị ọsọ ọsọ?
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Inweta njem nleta » Ndị nkuzi na-enye ndị na-agagharị agagharị ọsọ ọsọ?
Inweta njem nleta • Akụkọ UK na -agbasa
Njem njem nwere ike ịbụ nnukwu ngwungwu ọ funụ, na-akpọrọ gị gaa ebe pụrụ iche nke ị naghị enwe ntụsara ahụ ịkwọga onwe gị. Ma, maka ndị na-agagharị agagharị, onye nchịkwa ma ọ bụ njem ụgbọ ala nwere ike ịbụ naanị ụdị njem ha nwere ike iji, nke mere na ọ na-adịwanye mkpa na ụgbọ ala ndị a na-elekọta ndị mmadụ na-agba mgba na-agagharị. Vehiclesgbọ ala nwere ike ịnweta oche ọlụsị na-apụtawanye ìhè na ọha mmadụ nke oge a, gụnyere ụdị ndị nkuzi, mana ha na-aga n'ihu karịa iji hụ na njem maka ndị nwere nsogbu agagharị enweghị ntụpọ dị ka o kwere mee?
Ee - Ramps Kama nke steepụ
Dị ka ị nwere ike ịchọpụta n'ụgbọ ala ụfọdụ, a na-achọ steepụ iji ruo oche ndị dị n'akụkụ azụ nke nchịkwa ahụ. Maka ndị chọrọ iji oche nkwagharị na-agagharị, nke a enweghị isi ma ọ ga-egbochi onye ahụ iru oche ndị a. Otú ọ dị, ndị nkuzi achọpụtala na agwaetiti ha enweghị usoro ọ bụla, kama nke ahụ, ha na-eji ramp ndị dị aghụghọ iji kwe ka ndị nọ n'oche nkwagharị ma ọ bụ ndị na-eji ụkwụ aga iru oche ndị a. Nke a bụ ihe na-enye ume ọhụrụ ịhụ, na anyị nwere ike na-atụ anya ịhụ na omume na-aga n'ihu na nchịkwa na-abịanụ.
Ee - Ogwe oche ndị ngwọrọ
Ọtụtụ ndị nkụzi na-ahụ na enwere ma ọ dịkarịa ala otu oche oche nkwagharị na ụgbọ ala ahụ, na-enye ndị nọ n'oche nkwagharị ịnọdụ ala n'udo ma mara na ọ gaghị adị ha mkpa ịgba mgba iji wepụ onwe ha n'oche wee banye ọzọ. Nke a na-eme ka ndụ dịrị ọtụtụ ndị na-agagharị agagharị mfe, na-ewepụ nchekasị ha nwere maka ịdọgbu onwe ha ma ọ bụ imenye onwe ha ihere n'ihu ọha. A sị ka e kwuwe, ndị mmadụ na-agagharị agagharị na-achọ ntụsara ahụ, nke bụ kpọmkwem ihe oghere oche ọlụsị na-enweta na onye nchịkwa.
Emela - Mkpa Ukwuu sara mbara maka Scooters
Ọzụzụ nwere nnukwu ohere nchekwa maka akpa nke ndị njem ahụ, mana ekwesịrị iji ohere a kachasị maka ndị na-eji skuuta agagharị. Ugbu a teknụzụ na-aga nke ọma n’ọgbọ anyị, ọtụtụ ndị nwere obere mbugharị na-eji skuuta dị ka ụzọ isi na-agagharị na gburugburu ha ma ọ bụghị oche nkwagharị. Agbanyeghị, ndị nkuzi anaghị enwekarị ike ilekọta ndị a, ebe ọ bụ na onye nchịkwa nwere ike ọ gaghị enwe ohere ịchekwa skuta na-agagharị agagharị, ma ọ bụ ikike iburu ya. Agbanyeghị, dịka ndị scooters ndị a na-aghọwanye amamịghe, ma na-enwekarị ike apịaji iji bulie ohere, ndị nkuzi nwere ike ị nweta ndị a n'oge na-adịghị anya, ma kwe ka ndị nwere skuuta na-agagharị agagharị iji nweta onwe ha n'enweghị nsogbu.
Mba - Tolọ mposi ka dịkwa ike ịnweta
Otutu nsogbu ngagharị na-ebilite ozugbo anyị mere agadi, na ịka nká na-abịa eriri afọ anyị ebelatala. Maka nke a, ụlọ mposi dị na nchịkwa kwesịrị ịnwe ohere dị ka o kwere mee; ma ọ bụghị ya, ndị njem nwere ike ịda mba. Agbanyeghị, ọtụtụ ndị nkuzi n’ụbọchị a nwere ụlọ mposi ndị dị na okpuru ụfọdụ akwa steepụ miri emi, na-eme ka ha ghara ịbịaru ndị nwere oke ngagharị. Ọ bụ ezie na nke a bụ esemokwu siri ike iji dozie ya n'ihi njirimara nke onye nchịkwa, enwere ike itinye usoro ebe ohere ụlọ mposi nwekwara ike ibi site na mpụga nke onye nchịkwa. Zọ a, mgbe onye nwere obere mbugharị chọrọ ụlọ mposi, onye nchịkwa nwere ike ịkwụsị ebe dị nso na nso nso ma hapụ onye njem ahụ ka ọ kwụsị onwe ya.
Yabụ, o doro anya ịhụ ka ndị nkuzi na-agbasi mbọ ike iji mee ka njem site na nchịkwa dị mfe maka ndị nwere obere agagharị, n'agbanyeghị na ọtụtụ ka nwere ụzọ dị iche iche ha ga-aga tupu ha ebuli ọrụ ha nwere ike ịnweta.